प्युठानमा जीप दुर्घटना: चालकको मृत्यु, सह-चालक गम्भीर घाइते - माडी खबर
प्युठानमा जीप दुर्घटना: चालकको मृत्यु, सह-चालक गम्भीर घाइते
माडी खबर calendar_today २९ कार्तिक २०७८, 5:53 am
प्युठान । प्युठानमा जीप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ भने सहचालक गम्भीर घाइते भएका छन् ।
मल्लारानी गाउँपालिका वडा नं. ३ बुकेनी भन्ने ठाउँमा आज विहान लु १ ज १९९२ नं.को जीप दुर्घटना हुँदा सोही ठाउँकै ३५ वर्षीय चालक गोरख बहादुर पुनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनको घटना स्थलमै मृत्यु भएको हो । जीपका सहचालक प्युठान गनरपालिका वडा नं. ५ का करिब २० वर्षीय निदेश नेपाली गम्भीर घाइते भएका छन् । उनको जिल्ला अस्पताल विजुवार उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी प्रवक्ता तथा ईन्पेक्टर प्रकाश खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार शवको मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको छ । उनको शवलाई पनि पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा नै लगिने छ ।
आज विहान गाडीको नं खान (यात्रु लगेर जाने समय कुर्न) जाने समयमा जीप दुर्घटनामा परेको हो । जीप सडकबाट करिब १ किलो मिटर तल भिरबाट खसेको छ। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न नसकेको प्रहरी प्रवक्ता खत्रीले बताउनुभयो । जीप पूर्ण रुपमा क्षेतिग्रस्त भएको छ।